Sistemụ ijikwa ikuku, ogo nchacha uzuzu, ọnụ ụzọ ụlọ dị ọcha - TekMax
Usoro njikwa ikuku
Igwe ntụ oyi dị n'ime ụlọ dị ọcha
Ogo nchacha uzuzu
Njikwa nrụgide nrụgide
Hazie usoro iyuzucha ọhụrụ
Njikwa ịmị mkpụrụ
Njikwa okpomọkụ na iru mmiri
Igwe njikwa akpaaka akpaka
Sistemụ Njikwa Ọkụ
Usoro ụlọ dị ọcha nwere ọgụgụ isi
Ike nkesa maka ngwa ọkụ
Usoro usoro mmepụta
Igwe ịsa ahụ
Mpekere agba nchara dị ọcha
Ọnụ ụzọ dị ọcha
Window dị ọcha
Usoro nkwado usoro mmepụta
Usoro gas usoro
Usoro na -akwado njikọ pipeline
Usoro mmiri usoro
Ndị na -eme egwuregwu & ndị mmekọ
Laboratory Biological FVIL
Ime ụlọ dị ọcha nke Kangyuan
Ime ụlọ dị ọcha nke Runhui
Maiquer Food Co., Ụlọ dị ọcha
Ime ụlọ Meihua Amino Acid Clean Room
Ruichi New Central Kitchen na Ngwa mmiri dị ọcha
Ọmụmụ ihe insulin Boao Bio-Pharmaceutical
Ime ụlọ dị ọcha Forster
Injinịa Sneghai dị ọcha
Ogbako ulo ogwu nke ZBD
Dalian TekMax, tọrọ ntọala na 2005 ya na isi obodo edebanyere aha nke RMB20 nde, bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgbara ọhụrụ dị elu na-ahụ maka ndụmọdụ, imewe, iwu, nnwale, ọrụ na mmezi nke sistemụ gburugburu ebe obibi. Kemgbe ntọala, ụlọ ọrụ ahụ etinyela uche na teknụzụ nhicha na njikwa ngwa, gbakọtara ikike njikwa nhicha ụlọ nke ihe karịrị mmadụ 80…
Tọrọ ntọala na 2005
Ahụmahụ afọ 16
Ihe karịrị mmadụ 400
RMB nde 20
MOS ejiri aka mee dị ọcha roo ...
Magnesium oxysulfide fireproof mkpuchi panel (nke a na -akpọkarị oghere magnesium oxysulfide panel) bụ ihe dị mkpa pụrụ iche maka agba nchara ọcha. Emere ya na magnesium sulfate, magnesium oxide na ihe ndị ọzọ, kpuchie ya ma kpụzie ya wee gwọọ ya. Ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na -anaghị emetụta gburugburu ebe obibi ụdị ngwaahịa nsacha na ngwaahịa nchekwa ọkụ. E jiri ya tụnyere ụdị ihe ndị ọzọ na -acha agba nchara, ọ nwere uru nke mkpuchi ọkụ, mkpuchi mmiri, mkpuchi mkpuchi, fl ...
Ejiri mee oghere MgO cl ...
1. Ngwa dịgasị iche iche: A na-eji ngwaahịa ahụ arụ ụlọ dị ọcha, mkpuchi na ngwaahịa dị ọcha, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, nchekwa oyi, ogwe ntụ oyi. 2. Mgbasa ngwaahịa: Ngwaahịa gụnyere igwe dị elu nke akwa ajị anụ, ogwe elu aluminom (akwụkwọ) mmanụ abụ isi panle, elu elu gypsum isi panle, nchara elu gypsum rock ajị isi panle, akwa elu gypsum oyi akwa extrusion mesiri owu ike isi panle. Anyị nwekwara ike mepụta ezigbo onye òtù ọlụlụ ...
Eji mee nkume ajị cle ...
A na-ekewa panel nhicha anụ ajị anụ n'ime ụdị abụọ: ogwe ajị ajị nke igwe mere na ogwe ajị nke ejiri aka mee. N'ime ha, a na -ekewa ogwe akwa ajị anụ ejiri aka mee nke ọma, ogwe aka MgO rock ajị abụọ na ogwe aka ejiri akwa MgO. Ogwe nchacha ajị ajị anụ na usoro mmepụta ya bụ ihe ọhụrụ mepere emepe. Ogwe ajị anụ nke igwe rụpụtara na-eji ajị anụ na-eguzogide ọkụ dị ka ihe bụ isi ma nwee ọtụtụ ihe functi ...
Manual abụọ kwadoro Mg ...
Ogwe ụlọ dị ọcha MgO nwere ezigbo nguzogide ọkụ na ọ bụ ogwe na-anaghị ere ọkụ. Oge ire ọkụ na-aga n'ihu bụ efu, 800 ° C anaghị ere ọkụ, 1200 ° C na-enweghị ọkụ, wee rute ọkwa kachasị elu na-anaghị ere ọkụ A1. Usoro nkewa nke keel dị elu nwere oke iguzogide ọkụ nke awa 3. N'elu, nnukwu ike ọkụ nwere ike banye na ọkụ nke ọkụ, na -egbu oge mmụba nke gburugburu ebe obibi. Na ihu igwe kpọrọ nkụ, oyi na iru mmiri, onye na -eme ihe nkiri ...
Sistemụ ikuku ikuku gbara agba
N'ime ụlọ dị ọcha maka microelectronics na pharmac ...
Mgbasa oriọna UV
Ihe ndị na -emetụta mmetụta nke ultraviol ...
Sistemụ njikwa kọmputa
N'ihi mmepe nke teknụzụ kọmputa, ...
Ihe mgbawa na-egosi purifi ...
Mgbawa-àmà arụmọrụ nke mgbawa-àmà ...
Usoro eletrik na -apụta n'akụkụ niile nke ndụ anyị
Sistemụ eletriki na-apụta n'akụkụ niile nke ndụ anyị ， dịka: oriọna agbakwunyere, oriọna ime ụlọ, oriọna na-egosipụta mgbawa, oriọna germicidal igwe anaghị agba nchara, oriọna aluminom alloy na ihe ndị ọzọ ……. ? 1. ...
Mmepe nke teknụzụ ime ụlọ dị ọcha
Ime ụlọ dị ọcha na -ezo aka na mwepụ ụmụ irighiri, ikuku na -emerụ ahụ, nje na ihe mmetọ ndị ọzọ dị n'ime ikuku n'ime oghere ụfọdụ, yana njikwa okpomọkụ ụlọ, ịdị ọcha, nrụgide ime ụlọ, ọsọ ikuku na nkesa ikuku, mkpọtụ, ịma jijiji, ọkụ, na static. ọkụ eletrik n'ime ụfọdụ ...
Ala nke 7, ngọngọ B, Xinxing Xinghai Center, District Shahekou, Dalian, China
Window ime ụlọ dị ọcha, Na -eme ka akụkụ ikuku dị ọcha dị ọcha, Ụlọ dị ọcha, Usoro mmiri jụrụ oyi, Window gafere ọnụ ụlọ dị ọcha, Igwe ntụ oyi nke ụlọ dị ọcha,